SAWIRO:Madaxa cadaaladda oo la dardaarmay garsoorayaasha | Star FM
Home Wararka Kenya SAWIRO:Madaxa cadaaladda oo la dardaarmay garsoorayaasha
SAWIRO:Madaxa cadaaladda oo la dardaarmay garsoorayaasha
Madaxa cadaaladda dalka Mr. David Maraga oo maanta si rasmi ah howlgab u noqday ayaa garsoorayaasha maxkamadaha kala duwan ugu baaqay inay si hufan ugu adeegaan shacabka iyagoo raacaya xeerarka dastuuriga ah.
Maraga ayaa xaakinnada u sheegay inaynan ka cabsan saameyn ama faragelin uu ku yeesho golaha fulinta.
Waxaa uu kula dardaarmay inay mar kasta garab siiyaan cadaaladda oo ay adeegsadaan caddeymaha loo soo gudbiyo.
Maraga ayaa ku celceliyay in garsoorayaasha looga baahan yahay inaynan marnaba hoos u dhigin madax bannaanida waaxda garsoorka ee dalka.
David Maraga ayaa lagu xusuustaa go’aankii taariikhiga ahaa ee uu sanadkii 2017-kii waxba kama jiraan kaga soo qaaday natiijadii doorashadii madaxtinimo taasoo keentay in doorasho ku celis ah la qabto bishii tobnaad ee sanadkaas.
Waxaa uu si ku meel gaar ah shaqada ugu wareejiyay ku xigeenkiisa garsoore Philomena Mwilu.
Maraga ayaa madaxa cadaaladda ee dalka ahaa tan iyo sanadkii 2016-kii xilligaas oo uu kala wareegay Willy Mutunga.
Previous articleImaaraadka oo laga xaqiijiyay in ka badan 2,404 oo ah xaaladaha cusub ee COVID-19
Next articleDowladda oo sheegtay in boqolkiiba 93 ee dadka laga helay COVID-19 aysan astaamo muujin